Home ब्लग ब्लग विमाने मुसा र नारी गायिका
हिजो (भदौ २० गते) नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा मुसा पसेको समाचारले सबैलाई तान्यो। तर महत्त्वपूर्ण के थियो भने सबै पत्रिकामा छापिएका समाचार विवरण एउटै थिएनन्। तीन अखबारमा तीन शीर्षक र तीन घटना विवरणसहित छापियो। कुन चै ठीक ? प्रश्‍न त सोधियो तर जवाफ मिलेन। नागरिक दैनिकमा सुशील भट्टराईले मुसा लिएरै विमान उडेको समाचार लेखे। नागरिकको अङ्ग्रेज साथी रिपब्लिकाले मुसो भेटिएपछि विमान उडेको लेख्यो। उसकै दौतरी कान्तिपुरले भने उडान नै नभएको जानकारी दियो। साँच्चै के भयो भन्ने अन्यौल हुनु स्वाभाविक बन्यो। कान्तिपुरको समाचारमा मुसाको गुँढ नै फेला परेको भन्ने प्रसङ्ग थियो, जसले धेरैखाले शङ्का निवारण गर्‍यो। मुसाको गुँढ नै फेला पर्नुले त्यहाँ एउटामात्र मुसा थियो भन्ने तर्कलाई काट्यो। सुशीलले समाचार लेखेअनुसार विमान मुसासहितै उड्नु गलत भएन। रिपब्लिकाले मुसा फेला परेपछि भन्ने समाचार पनि सही नै ठहरियो किनकि एउटा भेटिएकै हो अर्को पनि मुसो भित्र हुनु ठूलो कुरा भएन। आज (भदौ २१) रिपब्लिकाले हिजो लागेको शङ्का मेटायो। मुसा भेटिएको पनि हो तर भित्र अर्को पनि रहेछ।
यो प्रसङ्गभन्दा अर्को रमाइलो प्रकरण बन्यो टुइटर प्रकरण। मुसा प्रकरण र न्युरोडको गुँदपाक गुणस्तरलाई व्यङ्ग्य गर्दै ट्विट गर्ने छलफल भयो, उमेशसँग। उसले तत्कालै मुसा काण्डको पिपलीलाइभ तयार पार्‍यो टुइटरमा। र, पहिलो सामग्री लेखियो : 'भर्खरै प्राप्‍त जानकारीअनुसार नेपाल एयरलाइन्सबाट मलेसिया पुगेको नेपाली मुसा विना कुनै भिसा त्यहाँको अध्यागमन पार गर्न सफल भएको छ। न्युरोडस्थित विशेष सूत्रका अनुसार ताजा कर्नर गुँदपाक भण्डारमा रहँदै आएको मुसाले नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा नतिरी तथा मलेसियाली सरकारलाई भिसा शुल्क नबुझाई त्यहाँको श्रम बजारमा प्रवेश पाएकोमा वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी महासङ्घले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ।
अन्यथा नलागोस्, यो रमाइलोका लागि गरिएको टिप्पणीमात्रै थियो। त्यसपछि उमेशले टुइटिने क्रम सुरु भयो। उसले कुन पत्रिकाले के समाचार दिए भन्नेबारे लिङ्कसहित हाल्न थाल्यो। टुइटरमा मुसा प्रकरणलाई जबर्जस्ती गुँदपाकसँग जोडियो। त्यसपछि टुइटरमा रमेश ज्ञवालीले मुसोले रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेको व्यङ्ग्य गरे। उनले काल्पनिक उद्दरण तयार गरेर 'वैद्य पक्षले सरकारमाथि आक्षेप लगाएको न्युज दिए।' यो प्रसङ्ग नेपाल बन्दसम्म पुग्यो। टुइटिने क्रममा बाबुराम भट्टराईले सेना समायोजन समितिमा बुझाइएको साँचो चोर्न वैद्यले पठाएको मुसालाई विदेशतिर लुकाएर पठाउन लगाएका काल्पनिक कथा बुनियो।
नभन्दै बेलुका सुशीलले भन्यो- 'हङ्कङमा पुगेको त्यही विमान मुसा देखिएर रोकियो रे !' लौ दिनभरि गरेको गसिप यथार्थ त बन्दै छैन भन्ने लाग्यो। आज बिहानका अखबारमा यी सबै विवरण आइहाले पनि। बिहानै गुणराज लुइँटेल दाइले हामीलाई पछि पार्दै टुइटिसकेका थिए- र्‍याटमान्डू।
यही मुसाकै विषयमा आज टुइटिने रहर थिएन। हिजै बढी भएको हो कि जस्तो लागेको थियो। आज बिहानै रघुनाथ दाइले दामी भनेर चिनिएको हिमाल पत्रिकामा छापिएको लेखको एउटा शीर्षकमाथि टिप्पणी गर्नुभयो। ''नेपालको पहिलो नारी गायिका मेलवादेवी गुरुङ'' शीर्षक यही हो। नारी र गायिका लेखेको देखेर एकैछिन हाँसियो। उमेशले टुइटिहाल्यो पनि।
मिडियामा आएका कुरालाई टुइटिनु आफैंमा ठीक हो वा होइन थाहा छैन। तर यस्ता प्रसङ्गमा सोसल मिडियामा देखिएको चासोले रमाइलै लागेको थियो। मिडियाले गर्ने गल्ती अथवा सामान्य कमजोरीलाई पनि यस्ता मिडियाले औल्याउन सक्छन् नै। सुधार्न चाहनेका लागि यो राम्रो माध्यम पनि हो।
मुसा प्रकरणमा हामीले मात्रै बढी गसिप गर्‍यौं भन्ने लागिरहेकै बेला नागरिकका समाचार सम्पादक सुदीप श्रेष्ठले गरेको परिकल्पना सुनियो। उनी नेपाली मुसो हङ्कङमा पुगेर भीमकाय आकारमा बढेको कथा बुन्दै थिए। सिनेमाप्रेमी श्रेष्ठ भन्दै थिए- हलिउडमा भए यस्तोबारे फिल्म बनिसक्थ्यो।